ဇနျနဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၁
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဇယြောသီရိဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကို ကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွသော နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါ ဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျမွငျ့နှယျတို့ တကျရောကျကွပွီး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Nikolay A.LISTOPADOV ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ဒုတိယကာကှယျရေးဝနျကွီး Colonel General Alexander V.FOMIN ၊ ရုရှားတပျမတျောမှအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ ရုရှားနိုငျငံစဈသံမှူးတို့တကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီးသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌တှဆေုံ့၍ အပွနျအလှနျနှုတျခှနျးဆကျ စကားမြားပွောကွားခဲ့ကွသညျ။
ထို့နောကျ ရုရှား-မွနျမာ နှဈနိုငျငံအကြိုးတူဆှေးနှေးပှဲပွုလုပျခဲ့ရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ယခုကဲ့သို့ COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ဖွဈပှားနစေဉျကာလ အတှငျး မွနျမာနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးလာရောကျ၍ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျ အကွား ဆှေးနှေးမှုမြားကို ပွုလုပျနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ မြားစှာကွိုဆိုဝမျးမွောကျမိ ပါကွောငျး၊ ယခုခရီးစဉျသညျ အဆှတေျော ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီး ၏ ၂၀၂၁ ခုနှဈ နှဈသဈအတှငျး ပထမဦးဆုံးသော ပွညျပခရီးစဉျဖွဈသညျဟုလညျး သိရှိရပါကွောငျး၊ အဆှတေျောကာကှယျရေးဝနျကွီးအနဖွေငျ့ မိမိတို့နိုငျငံသို့ ယခု အကွိမျသညျ တတိယအကွိမျလာရောကျခွငျးဖွဈပွီး မိမိအနဖွေငျ့လညျး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသို့ ၆ ကွိမျအထိသှားရောကျ လလေ့ာလညျပတျခဲ့ပါကွောငျး၊ ထိုကဲ့သို့ အပွနျအလှနျ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား သှားရောကျခွငျးသညျ နှဈနိုငျငံနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြခငျရငျးနှီးမှုနှငျ့ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုမြား ပိုမိုခိုငျမွဲစရေေးအတှကျ မြားစှာ အထောကျအကူပွုစနေိုငျမညျ ဖွဈပါကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံအနဖွေငျ့ ခကျခဲသောကာလမြားကို ဖွတျသနျးခဲ့ရပွီး ထိုသို့ခကျခဲသောကာလမြားကို ဖွတျသနျးနရေခြိနျမြားတှငျ ရုရှားနိုငျငံ၏ မိတျဆှကေောငျးပီသစှာဖွငျ့ ကူညီဆောငျရှကျပေးမှုမြားကို လေးနကျစှာ အသိအမှတျပွုပါကွောငျးဖွငျ့ ဦးစှာပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ဧညျ့သညျတျော ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးက ယခုကဲ့သို့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့မြားစှာဖွငျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးလာရောကျရသညျ့အတှကျ မြားစှာဝမျးမွောကျမိပါကွောငျးနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြားသညျ စဈဘကျဆိုငျရာနှငျ့ စဈဘကျနညျးပညာဆိုငျရာမြားတှငျမြားစှာအထောကျအကူဖွဈစနေိုငျမညျဟု ယုံကွညျပါကွောငျး၊ မိမိအနဖွေငျ့ လကျရှိဖွဈပှားနသေညျ့ COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကူးစကျ နမှေုမြားကွားမှ နှဈနိုငျငံနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို အရှိနျအဟုနျမွှငျ့ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ ထိုသို့ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျလညျး မွနျမာနိုငျငံသို့ နှဈသဈကာလတှငျ ပထမဦးဆုံး ပွညျပခရီးစဉျအဖွဈ လာရောကျခွငျးဖွဈပါကွောငျး၊ မိမိတို့တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြခငျရငျးနှီးမှုမြားကို အောငျမွငျအောငျ တညျဆောကျနိုငျခဲ့ပွီး ပိုမိုတိုးမွှငျ့နိုငျရေး ဆကျလကျဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈပါကွောငျး၊ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၏ Victory Day of Great Patriotic War (၇၅)နှဈမွောကျ အထိမျးအမှတျ စဈရေးပွအခမျးအနားသို့ အဆှတေျော တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကိုယျတိုငျတကျရောကျပေးခဲ့သညျ့အတှကျလညျး မြားစှာကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ ထို့ပွငျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး လုံခွုံရေးဆိုငျရာဖိုရမျအပါအဝငျ International Army Games-2020 ၊ မဟာဗြူဟာမွောကျ စဈဦးစီးလကေ့ငျြ့ခနျး “KAVKAZ-2020” တို့တှငျလညျး မွနျမာတပျမတျောမှကိုယျစားလှယျအဖှဲ့မြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ပါကွောငျး၊ ထို့ပွငျ COVID-19 ရောဂါဖွဈပျေါမှုမြားကွောငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသို့ ပွနျလညျထှကျခှာရနျအခကျအခဲ ဖွဈပျေါနသေညျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသား မြားကို မွနျမာ့တပျမတျောမှ ကူညီချေါဆောငျပေးခဲ့သညျ့အတှကျလညျး မြားစှာကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးဖွငျ့ ပွနျလညျပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မိမိတို့နှဈနိုငျငံ၏ သံတမနျဆကျဆံရေးကို ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၈ ရကျတှငျ စတငျခဲ့ပွီး သံတမနျဆကျဆံမှုသကျတမျး ၇၃ နှဈပွညျ့မွောကျတော့မညျဖွဈပါကွောငျး၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား မဟာဗြူဟာမွောကျ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးနှငျ့ စဈဘကျနညျးပညာဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကဏ်ဍမြားတှငျ စဉျဆကျမပွတျတိုးတကျအောငျဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ပါကွောငျး၊ နညျးပညာလိုအပျခကျြမြားအရ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုပုံစံအသဈမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ စဈဘကျနညျးပညာကဏ်ဍတှငျ ပိုမိုတိုးတကျခဲ့ကွောငျး၊ ဆကျလကျ၍လညျး တပျမတျောနှဈရပျအကွား ကဏ်ဍပေါငျးစုံ၌ ရရှေညျပိုမိုတိုးတကျအောငျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြား ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ အပွနျအလှနျသှားရောကျခွငျးဖွငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ရှိရငျးစှဲခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာလာစမေညျဖွဈပါကွောငျး၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာလာသညျနှငျ့အမြှ နှဈနိုငျငံအကွား ဆကျဆံမှုမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားသညျလညျး ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာလာ မညျဖွဈပါကွောငျး၊ ရုရှားတပျမတျောအနဖွေငျ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး ဆိုဗီယကျပွညျသူလူထု၏ မဟာမြိုးခဈြစဈပှဲကွီး(၁၉၄၁-၁၉၄၅)အောငျနိုငျမှု Victory Day of Great Patriotic War (၇၅)နှဈမွောကျ အထိမျးအမှတျစဈရေးပွ အခမျးအနားအပါအဝငျ ကွီးကယျြခမျးနားသညျ့ အခမျးအနားမြားနှငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားကို အခကျအခဲမြားကွားမှ အောငျမွငျစှာကငျြးပပွုလုပျနိုငျခဲ့သညျကို တှရှေိ့ရပါကွောငျးဖွငျ့ ပွောကွားသညျ။
ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက မိမိတို့နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား စဈဘကျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို မြားစှာဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ပွီး ယခုနှဈတှငျလညျး စဈဘကျဆိုငျရာဆှေးနှေးပှဲမြား ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါကွောငျး၊ အာဆီယံအပေါငျး ကာကှယျရေးဝနျကွီးမြားအစညျးအဝေး ADMM PLUS တှငျလညျး အကွမျးဖကျမှု တားဆီးကာကှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈပါကွောငျး၊ တပျမတျောနှဈရပျ အကွားစဈဘကျဆိုငျရာ၊ စဈဘကျနညျးပညာဆိုငျရာနှငျ့ အခွားကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို မြားစှာအားရကနြေပျပါကွောငျးနှငျ့ ယခုနှဈအတှငျး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံတှငျပွုလုပျသညျ့ စဈဘကျဆိုငျရာလကေ့ငျြ့ခနျးမြားတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့သူမြားကို ပွိုငျပှဲမတိုငျမီ ကွိုတငျလကေ့ငျြ့မှုမြား ဆောငျရှကျပေးသှားမညျ ဖွဈပါကွောငျးဖွငျ့ ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား စဈဘကျနညျးပညာပူး ပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ တပျမတျော(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ)တပျဖှဲ့မြားနှငျ့ လကျရုံးတပျဖှဲ့မြား၏ စှမျးရညျတိုးတကျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာ့တပျမတျောမှ သငျတနျးသားစလှေတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ အကွမျးဖကျမှုတားဆီးကာကှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ဒသေတှငျးတညျငွိမျအေးခမျြး ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏လကျရှိဖွဈပျေါနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရေးခရီးမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးနှငျ့ခဈြ ကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ လူသားခငျြးစာနာ ထောကျထား မှုဆိုငျရာကဏ်ဍမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားကဏ်ဍတိုးမွှငျ့နိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြး ဖလှယျ ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီးအား ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျောနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံတို့၏ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ စဈဘကျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တညျတံ့ခိုငျမွဲရေးကို ပိုမိုတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သဖွငျ့ ဂုဏျထူးဆောငျတံဆိပျနှငျ့ ဂုဏျထူးဆောငျဓားကို ဂုဏျပွုပေးအပျခြီးမွှငျ့သညျ။ ထို့နောကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီးက တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျအား နှဈနိုငျငံစဈဘကျနညျးပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြားတှငျ စှမျးစှမျးတမံဆောငျရှကျခဲ့သညျ့အတှကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ စဈဘကျနညျးပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဖကျဒရယျအဖှဲ့ Federal Service for Military Technical Cooperation(FSMTC) မှ ခြီးမွှငျ့သညျ့ဂုဏျထူးဆောငျ ထူးခြှနျဆုတံဆိပျကို တပျဆငျပေးအပျခြီးမွှငျ့သညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအား ရငျးရငျးနှီးနှီးနှုတျဆကျခဲ့ကွသညျ။
ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျလညျး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ သူရဲကောငျးဗိမာနျ(နပွေညျတျော)သို့ သှားရောကျ၍ ပနျးခှခြေ အလေးပွုခဲ့ပွီး သူရဲကောငျးဗိမာနျအတှငျး လလေ့ာကွညျ့ရှုခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ – ၂၂
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို သည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီးတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီး များ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay A.LISTOPADOV ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Colonel General Alexander V.FOMIN ၊ ရုရှား တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများနှင့် ရုရှားနိုင်ငံစစ်သံမှူးတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌တွေ့ဆုံ၍ အပြန်အလှန်နှုတ်ခွန်းဆက် စကားများပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ရုရှား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ယခုကဲ့သို့ COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်၍ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား ဆွေးနွေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် များစွာကြိုဆိုဝမ်းမြောက်မိ ပါကြောင်း၊ ယခုခရီးစဉ်သည် အဆွေတော် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်သစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးသော ပြည်ပခရီးစဉ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရှိရပါကြောင်း၊ အဆွေတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံသို့ ယခု အကြိမ်သည် တတိယအကြိမ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့်လည်း ရုရှားဖက်ဒရေး ရှင်းနိုင်ငံသို့ ၆ ကြိမ်အထိသွားရောက် လေ့လာလည်ပတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ သွားရောက်ခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုများ ပိုမိုခိုင်မြဲစေရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် ခက်ခဲသော ကာလများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ထိုသို့ခက်ခဲသောကာလများကို ဖြတ်သန်းနေရချိန် များတွင် ရုရှားနိုင်ငံ၏ မိတ်ဆွေကောင်းပီသစွာဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို လေးနက်စွာ အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းဖြင့် ဦးစွာပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဧည့်သည်တော် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များစွာဖြင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်ရသည့်အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနှင့် စစ် ဘက်နည်းပညာဆိုင်ရာများတွင် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါ ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကူးစက် နေမှုများကြားမှ နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်သစ်ကာလတွင် ပထမဦးဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများကို အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၏ Victory Day of Great Patriotic War (၇၅)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ အဆွေတော် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပေးခဲ့သည့်အတွက်လည်း များစွာကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖိုရမ်အပါအဝင် International Army Games-2020 ၊ မဟာဗျူဟာမြောက် စစ်ဦးစီးလေ့ကျင့်ခန်း “KAVKAZ-2020” တို့တွင်လည်း မြန်မာတပ်မတော်မှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုများကြောင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသား များကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ကူညီခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အတွက်လည်း များစွာကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံ၏ သံတမန် ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး သံတမန်ဆက်ဆံ မှုသက်တမ်း ၇၃ နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား မဟာဗျူဟာမြောက် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် စစ်ဘက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအသစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် စစ်ဘက်နည်းပညာကဏ္ဍတွင် ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၌ ရေရှည်ပိုမိုတိုးတက် အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် အပြန်အလှန်သွားရောက်ခြင်းဖြင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာသည်နှင့်အမျှ နှစ်နိုင်ငံ အကြား ဆက်ဆံမှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည်လည်း ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရုရှားတပ်မတော်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဆိုဗီယက်ပြည်သူ လူထု၏ မဟာမျိုးချစ်စစ်ပွဲကြီး(၁၉၄၁-၁၉၄၅)အောင်နိုင်မှု Victory Day of Great Patriotic War (၇၅)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားအပါအဝင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့် အခမ်းအနားများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို အခက်အခဲများကြားမှ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား စစ်ဘက်ဆိုင် ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို များစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း စစ်ဘက် ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံအပေါင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMM PLUS တွင်လည်း အကြမ်းဖက်မှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၊ စစ်ဘက်နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို များစွာအားရကျေနပ်ပါကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများကို ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ကြိုတင်လေ့ကျင့်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား စစ်ဘက်နည်းပညာပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)တပ်ဖွဲ့များနှင့် လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ သင်တန်းသားစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေးခရီးများ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးနှင့်ချစ် ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထား မှုဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံကမ္ဘာ လှည့်ခရီးသွားကဏ္ဍတိုးမြှင့်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ရုရှားဖက်ဒရေး ရှင်း နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတို့၏ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဓားကို ဂုဏ်ပြုပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။ ထို့နောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား နှစ်နိုင်ငံ စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ် များတွင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ စစ်ဘက် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖက်ဒရယ်အဖွဲ့ Federal Service for Military Technical Cooperation(FSMTC) မှ ချီးမြှင့်သည့်ဂုဏ်ထူးဆောင် ထူးချွန်ဆုတံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက် ခဲ့ကြသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သူရဲကောင်းဗိမာန်(နေပြည်တော်)သို့ သွားရောက်၍ ပန်းခွေချ အလေးပြုခဲ့ပြီး သူရဲကောင်းဗိမာန်အတွင်း လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။